I-Massage seat pad - iSearch
Qala ikhemisi impilo Isembozo sokuhlala esihlalweni sobukhosi
Okthoba 8, 2017
I-massage ye-tapping ingenye yezindlela zokugaya kakhulu kakhulu.
Ivuselela ukujikeleza kwegazi futhi kusize ukuphumula ukuhlukumeza komzimba.
Ngokufanayo, kuphumelela ukukhokhela ukulayishwa kwe-unilateral, ukuvuselela amangqamuzana ezicubu ezijulile nokushisa umzimba.
I-massage ye-tapping iyasiza ngisho nokwakhiwa kwemisipha futhi ibuye ibe nethonya elihle futhi elimnandi kwi-bronchi.
- Ubuhlungu obubangelwa yi-rheumatism
- Izinhlungu ngenxa yokukhathala
Njengezandla ezimbili, izinkinobho zokusilalisa zigoqa phakathi komgogodla.
Lokhu kunwetshiwe futhi kunwetshiwe ngenkathi ukwelashwa.
Ngokwenza kanjalo, i-disc intervertebral ikhululiwe.
I-massage yenziwa njengeminwe ye-masseur, igqugquzela amaphuzu athile,
Imisipha nezicubu zikhululekile futhi zikhululekile, ezikhuthaza ukujikeleza kwegazi. Ukuvimbela ikhanda kanye ne-migraine.
Ukuphefumula kutholakala emithi yendabuko yamaShayina (TMC) njengokwelashwa okuyinhloko noma okuhambisanayo.
Ngakwesobunxele nangakwesokudla se-spine ngemva kokulashwa kwe-massage i-SHIATSU yamandla we-meridians abalulekile. Ukuncipha kwemisipha yangemuva kuvimbela ukugeleza kwamandla futhi kungabangela izinkinga zempilo.
I-shiatsu massage technique ivuselela amaphuzu abalulekile wokugcoba ngemuva.
Ngakho-ke amandla omzimba alinganisela futhi ukuzivikela kuyaqiniswa.
Ngesikhathi esifanayo uShiatsu usebenzisa i-tsubos (amaphuzu), okuyiwona ophethe izitho ezifanele.
Ukucindezela kuhloswe ukuqeda ukuphazanyiswa kokulinganisela kwamandla okuphila, okufana nalabo abangelwa ukucindezeleka noma indlela yokuphila engalungile, kanjalo nokunciphisa izimpawu ezihlukahlukene.
Ngokuya ngohlobo lokugqugquzela, iShiatsu inomthelela okhuthazayo nokuqabulayo kuwo wonke umzimba.
Ukulwa nobuhlungu endaweni ye-lumbar uhlwitha i-acupressure massage kusiza kangcono kune-physiotherapy ye-classic.
- ubuhlungu obunzima bomsipha nokuqina
- Ubuhlungu besiphambano
- Ukukhathala kwe-syndromes
- Ukuphakama kwesibuko senjabulo ye-hormone serotine
- futhi kunconywa ukucindezeleka nokucindezeleka
- Ukuphazamiseka kokulala
- Izinkinga zokuya esikhathini
- Kukhuthaza ukujikeleza kwegazi ngesikhumba esinyenyekile nokukhwabanisa
+ Ukuphefumula akufanele kusetshenziselwe izifo ezithathelwanayo, i-osteoperosis, ukulimala okwakamuva, i-thrombosis, i-varicose veins, i-tumor, nokukhulelwa.
Ubuhlungu be-back emuva nawe?
Ngezinhlungu emuva ubuhlungu buqala!
Empeleni, indaba iqala ebuntwaneni. Izingane zesikole zivame ukuthwala ama-satcheli amakhulu kakhulu, imfashini ayihambisani nemhlane, kodwa. emaceleni. Lokhu kudala kudala umonakalo osemuva. Kungakhathaliseki ukuthi kusebenza noma kwenye umsebenzi umhlane uphinde ulayishwe kakhulu. Izinto ezinzima ziphakanyiswa ngendlela engafanele, imidlalo isetshenzisiwe kancane ngezizathu zesikhathi
Imizila encane iqhutshwa imoto. Ngokuvamile, ukucasuka kwekholomu yomgogodla, okunomthelela omubi eminye imisebenzi yomzimba, kukhishwa lapha.
Ukucasuka okunjalo kungaveza ngisho nobuhlungu obukhulu.
EYurophu, izibalo, i-27-40% yazo zonke izakhamuzi njengamanje zibuhlungu emuva.
Mayelana no-70% wabantu, lobu buhlungu buba okungenani izikhathi ezingu-1 ngonyaka:
Ngokuvamile ngisho nophenyo olujulile akukho zimbangela ezingatholakala.
Ezingaphezu kwengxenye yesithathu yamacala, ubuhlungu bokubuyela emuva buhlobene nokucindezeleka kwengqondo,
ezifana nokucindezeleka emsebenzini. Imiphumela entsha yocwaningo ibonisa. Ukuze lokhu kube yimbangela yezinhlungu okuthiwa phantom. Ukuvakasha kukadokotela kuvame ukusiza lapha, kodwa ngokuvamile imbangela ayilawulwa kahle. Imisimbozo kuphela yesikhathi esifushane futhi ekugcineni kunenkinga yokubuyela emuva engapheli.
Okokugcina, umgogodla wezilwane uhlaselwa ukuthi ukugqoka kungabangela i-disc herniated. Ngokuvamile kungadalwa ikhambi lokuvimbela.
Imithi yesintu yamaShayina isekelwe emithini yemvelo. Umzimba uhamba nge-okuthiwa ama-meridians. Ukuphila kwamandla Ki kugeleza ngokusebenzisa lezi ziteshi. Lezi ziphetho zifanekiselwa okuthiwa yiTsubus. Isitho ngasinye singanikezwa ngokuqondile ngalezi zindawo zamapulangwe.
Uma kukhona ukuphazamiseka kwalezi zinhlobo ze-meridians, ukuphazamiseka kwesisindo somzimba wonke kuzovame ukuvela. Ngokuvamile imiphumela yilezi: izinwele / i-migraines, izinkinga zokulala, izinkinga zokugaya ukudla noma ubuhlungu bokubuyela emuva. Ngezinkinga zokuhlunga ezihlosiwe ezithinta ukulinganisela komzimba futhi ziholele ekutheni zingahle zibhekiswe.
Shiatsu massage kusebenze amaphuzu (Tsubus). Ophethe izitho ezifanele athola.
Uma ugxila ukugubha umfutho wezinhlanzi ezithile kuxoxwa ngakho bese uhambelana futhi namanye ama-meridians bese uthonya izitho. Lezi amaphuzu ezibucayi abhekwa ngamasu ahlukahlukene njengengcindezi. Uma i-Tsubos ebucayi ishaywe neqembu lomunwe, ngokuvamile uthola impendulo esheshayo evela kumuntu othintekile. (Ubuhlungu).
Kusukela ekucindezelekeni okubuhlungu, okungaqondakali njengokungathandeki, ekugcineni kubangele ukuzwa okuthakazelisayo okugcina kusakaze phezu komzimba wonke. Izitulo zamasahla zanamuhla ziyakwazi ukunikeza le ndlela yokusikhipha imishini kaningi kangcono kunamassebhu ekhaya egumbini lokuphumula.
Ubukhulu bomzimba bukhishwa kuqala. Ngesistimu ekhethekile ye-roller ehamba ngokuqondile futhi ebonakalayo, amandla okubutheka aziswa emzimbeni.
Ama-motors eyengeziwe angama-vibration avumela ukusikhipha okulula okumele kwenziwe.
Ukwesekwa okuhlosiwe kwezindiza okuthiwa yi-airbags endaweni yangasemuva nangomlenze kufanekisela ukuhlunga i-acupressure ngqo.
Ama-rollers asetshenziswe endaweni yangasese akwazi ukwenza izinhlobo ezihlukahlukene zokusikhipha.
Amathuluzi awusizo wokubuthelwa kwezicucu ekuhleleni - ukusikhipha umzimba
Ukubhunga umzimba ngenkathi uhlezi kuyathandwa kakhulu, ikakhulukazi uma kuziwa ekupakheni kweselula. Leli fomu le-massage lisekelwe eminyakeni engu-1980 kuphela. Kuze kube yilesi sikhathi, ukusikhipha umzimba kwakuvame ukulala phansi. Kodwa lokhu kushintshile kakhulu ekuthuthukiseni ukusikhipha umzimba. Iziguli eziningi namuhla zikhetha ukusikhipha lapho zihlezi. Futhi kulabo abathintekayo ukuxilonga kwaba ukuthuthukiswa okuwusizo kakhulu. Ngenxa yokuthuthukiswa kwe-massage, ukusikhamba kweselula kwathandwa kakhulu eminyakeni ye-1980. Lokhu kusho ukuthi inkonzo yangaphakathi nendawo ngokuphathelene nokusikhipha umzimba ihlangana nomoya wesikhathi ngaleso sikhathi. Kodwa konke kwase kuqalile njengohlobo lwe-"mass massage", olwaluhlinzekwa ekuqaleni emahhovisi, ezindizeni zezindiza nasemibonisweni nasezinkomfeni futhi kusukela lapho kuya ekhaya.
Ngenxa yezihlalo zokumisa massage, i-massage ingafakwa noma ikuphi lapho uthanda khona. Ukusikhipha emzimbeni kusetshenziselwa ikakhulukazi inhlanzi nezintambo ezinenkani. Isihlalo esibucayi siyatholakala
Ukuphumula ngesikhathi esincane. Ngoba isiguli akudingeki sibheke isikhundla esihlezi esihlalweni sokusihlalisa isikhathi eside esingadingekile. Isihlalo sokusikhipha, isibonelo, sichaza ukuthi umuntu kufanele athembele kanjani kule thuluzi noma angakwenza kuphela ukuzwa ukuphumula. Amathuluzi awusizo wokubuthelwa kwezicucu ekuhleleni - ukusikhipha umzimba
Izihlalo ze-Massage azikwazi ukusiza kuphela uma kuziwa ekuphumuleni. Uma unenkinga ngomhlane wakho, isihlalo sokusikhipha umzimba singakusiza nawe. Ngesikhathi esifanayo ukutholakala kwesitulo esinjalo kungasindisa eyodwa noma enye ukuvakashela ku-physiotherapist. Lezi zikhathi ezidliwayo, okuyiqiniso nakwezokuzivocavoca e-gym. Izihlalo ezihlaba umqubuzi zihlambalaza, phakathi kwezinye izinto, ukuhlambalaza. Ukusikwa kwe-roller noma inqubo ye-Shiatsu iyakuthandwa ngokufanayo futhi imele ukuphumula okuhlanzekile. Akunandaba ukuthi isihlalo sisetshenziswa ehhovisi noma ekhaya.
Okusha kakhulu okuthiwa ubuchwepheshe besinzwa se-3D, esetshenziselwa ukuhamba. Ingemuva iqala ukuskena bese kungenzeka ukuthi ukuhlunga kufakwe kahle. Ukuncintisana noma ukuqina kungancipha njalo. Esimweni esihle kakhulu izikhalazo ezinjalo zingasuswa ngokuphelele.
Kunezindawo ezihlukene lapho isihlalo esibukwayo singasebenza khona. Uma unesifo sokulala, ungase ukwazi ngisho nokuhlola isihlalo sobuhlalo salo hlobo. Ngesikhathi esifanayo, izihlalo zangasese ziphikisana nezimpawu ezihlukahlukene zokucindezeleka. Ukuhlukunyezwa kungakhululwa hhayi kuphela emisipha engemuva kodwa nasemaphethweni noma entanyeni. Uma ukucindezeleka kungaxazululwa, lokhu kuvimbela ubuhlungu. Noma kunjalo, izimpawu zomlenze onzima zingenziwa kalula emhlabeni. Uhlelo lwesimiso se-vegetative luthonywa ngendlela enhle futhi ngokuvamile ukuphumula kwengqondo kungatholakala. Izinkampani eziningi ziye zanikeza ama-massage amadokodo iminyaka eminingi futhi ngakho-ke zinokuhlangenwe nakho okukhulu kule nkambu. Ngezinye izikhathi kunconywa ukuthi isihlalo salobuhlalo esinjalo sihlolwe esitolo sefenisha. Lokhu kungavimbela ukudumazeka okukhulu ngemuva kokuthenga.
Izihlalo ezihlaba umkhosi zinikeza okungaphezu nje kokusikhipha
Abantu abaningi baye bacabanga ngokusihlalo we-massage, kodwa bavame ukushiya izindleko zokuthenga isihlalo esinjalo. Ngaphezu kwalokho, lo mbuzo uvela mayelana nezinzuzo. Isihlalo sokusihlalisa singakwazi yini ngempela ukunciphisa ukungezwani nokukhulula umgogodla? Yebo, isihlalo esinjalo se-massage singakwenza lokhu nokuningi okuningi.
Isihlalo esihlabayo sihlinzeka ngokuphumula
Izitifiketi zethu eziphezulu ze-massage zifakazela nsuku zonke ukuthi umgogodla ukhululekile futhi kukhishwa ukungezwani. Ngakho-ke bakhuthaza impilo futhi banomthelela enhlalakahle jikelele. Ukuvakashela ku-physiotherapist ngokuvamile akudingekile, ikakhulukazi kusukela lapho kukhona izikhathi zokulinda zokwelapha okusheshayo ngakho-ke ukukhululeka kwesimpawu kuphikisa. Izihlalo zethu azigcini nje ngokomzimba, kodwa futhi ziyi-psychic.
Izihlalo zethu zokusikhipha umzimba zizimele
Sithwala izihlalo, ezihlelwe ngabanye, okusho ukuthi ukuhlunga okufanelekile kufanelana nobukhulu nesisindo. Ngaphambi kokubilisa umzimba, umzimba uhlungwa, ngakho-ke amaphuzu akhethekile atholakala futhi idivayisi isebenza lapho kudingeka khona. Kodwa hhayi kuphela impilo enempilo eqiniswayo, futhi ukuhlanzeka komphefumulo akunganaki izihlalo zethu zokusikhipha. Ngemuva kokwelapha okunjalo, abasebenzisi abaningi baphumula ukuphumula okuzithokozisa kuwo wonke umzimba futhi lokhu kuyathinta isimo sengqondo.
Gweba ngemuva ngesikhala sokusikhipha
Ngaphandle kokuzivocavoca isikhathi esiteshini se-studio / yokuzivocavoca, umhlane ungakhululeka futhi uhlotshiswe ngamasu ahlukahlukene wokugaya. Kungakhathaliseki ukuthi ukuxilonga, ukusikhipha umshini wokushisa noma ukushisa ama-shiatsu, izihlalo zethu zokuzihlalisa zizokugcwalisa ngamandla, ekhaya noma ehhovisi. Zazi ngokwakho ngaphandle kwesibopho enetheni mayelana nezitifiketi zethu eziphakeme ze-massage, uzomangala.
Ekugcineni ukuphumula ngemikhiqizo yezempilo njengesihlalo sobuhle
Wonke umuntu uyazi lokhu. Usuku olude lokusebenza ngemuva kwabo, ukucindezeleka okuningi emsebenzini, ukuxhaphaza.
Lokhu kuvame ukuholela ezinkingeni zasemuva, ukungezwani emisipha nasentanyeni, nezinye izinto eziningi ezingabonakali.
Ngakho-ke, imboni yempilo isondelene nanamuhla ngemikhiqizo eminingi (kufaka phakathi izipho zokuphila kahle) ngokuphathelene nokuphila kahle, ukubhucisa, i-sauna, kodwa futhi nemikhiqizo efana nezihlalo zokubhunga, izihlalo zokugcoba, amatafula okubhunga. Konke kuhle ukuphumula.
Kuleli khasi singathanda ukukusiza okuningi ngokuphila kahle ngezihlalo zokusikhipha izihlalo kanye nezihlalo zokusikhipha, kodwa futhi ukusikhipha ematendeni okubhunga. Ngokufanayo ukwazisa mayelana nesihloko, tshela konke okwenzela umzimba okuhle
Izimbongolo zokuhlambalaza zisiza ukukhulula ubuhlungu emuva
Ukucindezeleka okukhulu, ukunyakaza okungalungile, izinkinga emuva. Ubuhlungu bokubuyela emuva kuvame ukuxilongwa ukuthi ekugcineni kushuswe abasebenzi nabaqashi babo. Ngenxa yokuthi isisebenzi sibhekene nobuhlungu emuva, khona-ke kunengozi yokuthi uletha umbiko ogulayo kaningi kunomuntu onenkinga yokulawula. Ukulawulwa kulokhu kusho ukuthi izisebenzi eziningi ezenza umsebenzi ohlala phansi, usuku nosuku, isonto emva kweviki, nangonyaka nonyaka, zingathenga okuthile ngokubuhlungu emuva okwenzekile, ngokwesibonelo, isihlalo sokubuthwa ngokunethezeka. Izitifiketi zokuzilibazisa ezithandwayo zingenza izinhlobo ezahlukene zokusikhipha.
Amandla kagesi akuwona kuphela ukulawula ukuhluka kwe-massage, kodwa futhi i-backrest adjustable kanye nokweseka umlenze. Noma nje indlela eya kumasseur kanye ne-classical ngokuphelele ekusikeleni.
Kuwusizo isitulo massage / isihlalo massage kokubili asebekhulile nabasebenzisi abancane. Phela, intsha eningi isivele ihlushwa izinkinga zangemva. Yiqiniso awukwazi ukuthatha izihlalo zokubuthwa nawe ukuze usebenze, nakuba kungenzeka futhi ziguquke. Endaweni yomsebenzi ngokuqondile, ukuguqulwa okuvamile kokuhlala phansi kungasiza ekwenzeni izinto ezisezingeni eliphezulu nokuvimbela ubuhlungu emuva. Ngaphezu kwakho konke, ukuphakama kwesihlalo esifanele kufanele kubhekwe lapha. Ngaphezu kwalokho, ezemidlalo ezifana ne-aerobics, ukuhamba ngebhayisikili, nokuhamba ngezinyawo nokubhukuda kufanelekile ukuvimbela ubuhlungu emuva emuva. Ikhebula lamandla alidingekile ukuqhuba isihlalo sobuhle. Konke okudingayo ukunikezwa kwamandla we-220 V / 50 Hz / 180 W.
Ukuzibulala umzimba kuvumela noma yikuphi isikhundla ngesikhathi sokuphunga
Ama-massage ahlukahlukene afuna ukusekelwa lapho isiguli sizizwa sikhululeke khona. Ukuphunga imishini kuyakufanelekela ngale njongo. Lezi zifanelekile nokusetshenziswa kweselula futhi ngenxa yalesi sizathu kalula ngesisindo, ngaphezu kwalokho kuhlanganiswe kakhulu futhi kukhululekile. Phela, izihlalo zokugaya izicucu nazo zifanelekile ukusetshenziselwa amasosha ebhizinisi lasekhaya. Futhi lezi zitulo zokuxilonga nazo zine-okuthiwa i-Sternumkissen kanye ne-Tragetasche. Yebo
Ukuphakama kwesitifiketi, ukusikwa kwesibhamu, isifuba kanye nekhanda lezinsizakalo.
Ukubuthelwa kwegazi kukuvumela i-masseur ukuba ibeke isiguli sigxile. Lokhu akusho ukuthi zonke izilingo kufanele zenziwe ngemuva. Kukhona nokusikhipha umzimba, lapho ungadingi khona izinyathelo zosizo ezifana nesihlalo sokusikhipha. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kuKamasutra, nakuba amatshani wokugaya umzimba angasetshenziswa futhi.
Izihlalo zokubuthwa zisetshenziselwa ukuphumula ukuphumula. Izihlalo zokubuthwa zibukeka njengezihlalo zama-desk ergonomic ezifanele izingane. Lawa anembuyiselo, kodwa le ndawo yenzelwe izihlalo zokubuthwa lapho ubuso buthola indawo enhle khona. Isihlalo esihlabayo sihlinzeka isiguli esinamandla esinomthwalo ovikelekile kanye ne-masseur ithuba lokwenza kahle.
Ukuzivocavoca umzimba okusetshenziselwa ukusetshenziswa
Uma unqume ukuthi ungumuthi owufanelekayo we-massage futhi ufuna ukuphathwa endlini yakho, udinga izitsha ezibalulekile, ezingathunyelwa kalula ngangokunokwenzeka , Ngoba uma i-masseur iya kumakhasimende, ngakho-ke ayibuki njengokungathi uzophuma endlini yakhe noma abuyele esigodini. Lokhu kusho ukuthi, uma kunokwenzeka, izinto ezikwazi noma ezisetshenziselwa ukusetshenziswa komkhuba emotweni yakho (ngokukhangisa okubhalwe kahle kulungile lapha, ngakho-ke futhi wenze ukukhangisa endaweni yomguli ovakashelayo futhi ungenza ngale ndlela futhi amakhasimende amasha). Kodwa-ke, akudingeki uyenze ngaphandle kwama-massages ochwepheshe. Ngoba lezi ziphindiwe ngakho-ke kulula ukuthutha, kanye ne-massage lounger. Kodwa-ke, ukusikhipha umzimba kukhululekile kakhulu ngesiguli ngefomu elithile lokuzihlakulela kunokuba umuthi we-massage kufanele abacele ukuba bancike esihlalweni sabo sokudlela ukuze bajabulele ukusikhipha. Imibhede ye-massage yeselula nayo igxiliwe, empeleni, ukunikeza ukusekelwa okungcono kakhulu nokududuza isiguli. Ukufaneleka kufanele kube kuhlelwe ukuthi abantu abakhuluphele ngokweqile bangaphathwa.
Imibhede yokubulala imishini - Imishini eyisisekelo yokwehla kwamatshe okushisa
Ukubhula kungenziwa noma kuphi. Abashumayeli abaningi banikela ngezinsizakalo zabo futhi zithinta. Lokhu kusho ukuthi bafika ekhaya. Futhi ukuphunga ngamatshe ashisayo kusetshenziselwa ingxenye ekhaya nabaklayenti. Kodwa-ke, i-masseur kumele ithathe imishini eminingi emotweni okushisayo. Ngaphandle kwamatshe ase-basalt lava, lokhu kufaka phakathi i-massage lounger. Lokhu kuyiselula futhi kuhlangene. Kokubili ukugcoba, kanye nokuzibulala kubiza ama-euro ambalwa kuphela njengemishini eyisisekelo.
I-massage yokusikhipha imisipha kufanele ibuye ibe nomklamo we-shapely, ngakho-ke a
Ukuhlanganiswa kobuchwepheshe nobuhle. Yiqiniso, itafula lokusikhipha imishini lenza umqondo omuhle lapho lenziwe ngohlaka oluhle lwe-aluminium. Uhlaka olunjalo lwakhiwe ngokushesha, ngokuvamile ngaphakathi kwamasekhondi ambalwa. Yiqiniso, leli thembula lokusikhipha umzimba kufanele libe nelungelo lokunakekelwa. Ngoba emva kokusetshenziswa ngalunye, ithumela i-masseur enhle ngempela, uma iwahlanza. Ithebula lokubuthwa kufanele libe ne-stushion pad. Kungenxa yokuthi umsebenzisi we-massage kufanele nakanjani akwazi ukuzuza kusukela ekusebenzeni kwakhe. Ngaphezu kwalokho, i-pad yokupaka kufanele ibe nomthamo ophezulu kakhulu wemithwalo. Amatafula e-Massage kufanele akwazi ukumelana nama-kilo angu-300, ngoba ngemuva kwakho konke, i-masseur ifuna ukukhonza wonke amakhasimende, ngisho noma lena ingeza isisindo esincane esikalini.
Ukuphungula ubuhlungu be-back
Ubuhlungu be-back isinye sezifo zezwe emazweni athuthukile, ngakho-ke futhi eJalimane. Izibalo zanamuhla zikhombisa ukuthi amaJalimane amathathu kwabangu-4 ahlushwa ubuhlungu emuva emuva kwesikhathi esisodwa empilweni yabo. Kodwa ubuhlungu be-back emuva bungase buvele njalo, ubuhlungu be-back nge share of 5 kuya ku-10 amaphesenti yiyona imbangela evame kakhulu yokukhubazeka. Kodwa futhi abantu abaningi abangakwazi ukusebenza bahlushwa ubuhlungu obungapheli emuva. Isizathu salokhu ukuthi izigaba zamakholomu womgogodla ngamunye zenziwa ngaphansi kwezimo zokucindezeleka ezihlukahlukene emisebenzini ehlukahlukene. Ngenxa yalesi sizathu, bavame ukuthinteka izikhalazo ezifanele. Ubuhlungu ku-vertebra lumbar kungokwamaphesenti angu-62. Lezi yizinhlungu ezijwayelekile zokuwela. Kodwa futhi ubuhlungu besifuba kanye nentamo yokuvuvukala kwentamo kaningi kuthinteka. Kodwa ubuhlungu bungaba nzima nakakhulu. Ngakho-ke, izinkinga zama-laryngeal ne-sciatica ne-disc nazo zingenzeka.
Phakathi kwezinyathelo ezingathathwa ngokumelene nalesi ubuhlungu kukhona izidakamizwa. Kodwa-ke, uma ungafuni ukwenza lokhu esikhathini eside, kufanele nakanjani ucabange ukuthi ukusikhipha isisindo. Ukubuthwa ngokumelene nobuhlungu emuva kuqinisekisa ukuthi imisipha ekhululekile ikhululekile. Umgogodla uthululwa kahle. Kodwa-ke, hhayi kuphela ukuvimbela ngokomzimba kodwa futhi ukuvimbela kwengqondo kanye namandla kungasombululwa massage okunjalo.
Kungcono ukuqhuba ukusikhipha okunjalo ngokuqhubekayo njengokuvimbela, ukuze kungabi khona kulezi zingxabano nhlobo. Ngaphandle kokuhamba ukuya kumasseur ungathola isihlalo esibucayi, kodwa imboni nayo inikeza ama-whirlpools okukhethwa kukho, noma ungena ezikhungweni ze-sauna ezisebenzayo. Lapho ungakwazi ukukhululeka imisipha ngokusebenzisa ukushisa futhi ngesikhathi esifanayo ikakhulukazi massage ochwepheshe atholakalayo. Kanti futhi ekhaya kukhona amathuba futhi futhi isib. Massage - panel panel ukufakwa kalula eshaweni. Nakuba imikhiqizo enjengezihlalo zokubuthwa, i-whirlpool systems, i-sauna, njll. Konke kubiza imali, yebo, bangakwazi ukukhokha esikhathini eside futhi ungagcina ubuhlungu obukhulu kakhulu emuva kwesikhathi.
Balekela empilweni yansuku zonke. Phatha ikhanda. Lokhu kungenziwa kahle nge-massage ekhanda ekhanda. Nge-massage yekhanda umuntu uqonda yonke imvelo yekhanda, khuluma ubuso, entanyeni, entanyeni, kodwa futhi u-scalp. Kodwa hhayi ngokumelene nokungezwani kuphela kusiza ukusikhipha ikhanda. Ababheki bezinwele bancoma, isibonelo, ukusikhipha ikhanda njalo ngokumelene nezinwele zokulahleka. Nakuba lokhu akuwona ukwelashwa okuyisimangaliso, kodwa nakanjani kungabambezela ukulahlekelwa izinwele. Ngeshwa, abantu abayizigidi eziningana ngeshwa banenkinga yokulahlekelwa izinwele, kodwa ikakhulukazi bafa. Okwamanje, kukhona kakade izixazululo ezithembisayo. Ngakho-ke kukhona iphilisi ekhethekile yokusetshenziswa komlomo nesithako esisebenzayo se-finasteride, kodwa futhi nendlela yokubutheka ekhanda, njenge-Minoxidil. Umgomo ukuphulukisa izinwele zezinwele futhi ziphinde zenziwe nge-massage emihle yekhanda, lokhu kuphelela kahle kakhulu. Noma ubani ongakwazi ukufeza impumelelo, angasiza kuphela ngokufakelwa izinwele / ukufakelwa izinwele. Impumelelo ilapha, noma kunjalo, futhi mayelana nezinwele ezifakelwe izilwanyana ezinyangeni ze-12 kuze kube sekugcineni zikhula. Kubalulekile kuphela ukuzibikezela kahle kusengaphambili, njengezinkampani ezikhethekile. I-Hairforlife - u-Andreas Krämer, isibonelo, inikeza izeluleko eziningiliziwe mayelana nokufakelwa kwezinwele. Njengoba nje ulwazi oluhle lungatholakala emafomini, noma kuwebhu ngokujwayelekile. Kubalulekile ukuthola imibono eminingi ngaphambi kokungenelela.
Massage Thai - ukuthintwa yasendulo touch
I-massage yase-Thai isetshenziswa kakhulu eJalimane. Lena yindlela yokususa emandulo yakuqala evela eThailand. Leli fomu lokusilisa liyaziwa ngabaningi njengoN Nuad Phaen Boran. Futhi lokhu kuhumusha njengokuthi "ukuthinta okudala". ENtshonalanga Yurophu kodwa lokhu sikubiza uhlobo massage yoga Thai massage, ngoba lolu hlobo massage siqukethe engxenyeni yokwenziwa, othathwe yoga esisuka izikhundla futhi ngilulekela ukunyakaza, ukugqugquzela ngokuhlanganyela futhi ekugcineni massage ingcindezi iphuzu. I-masseur isebenza esigulini inhlanganisela ye-massage ngesandla, isithupha, kodwa namadolo nezinyawo nezinyawo. Imigqa yamandla idlala indima ebaluleke kakhulu kule fomu yokusikhipha. Yilapho okuthiwa i-Marmapunkte (amaphuzu amandla) amanga. Ngokusho kwemfundiso ye-Ayurvedic, umuntu unikezwa amandla okuphila (i-prana). I-prana ingahanjiswa emzimbeni ngokuphefumula. kungenziwa egqilazwe Thai massage isicanucanu, ikhanda, ukuqunjelwa, uhudo, futhi ezindlebeni, kanye nokuqwasha, iqolo, ngedolo futhi ukushaqeka futhi ukhwehlela. Lezi zingezindlela zokuziphatha ngesimo sendabuko. Ngaphezu kwalokho, kukhona nemiphumela evela embonweni wezokwelapha esikoleni. Ngaphezu kwakho konke, imithi yesikole ijabulisa ukuthi lezi zinsizwa ezicindezelayo zikhuthaza ukujikeleza kwegazi. kodwa ukunwetshwa ohambisana Ungase futhi khululeka Muskultur.
Ngokuvamile kungukuthi emva kweholidi elihle elisezingeni elihle elisezingeni eliphansi alinaso isifiso sokuphila kwansuku zonke. Omunye ulangazelela iphunga eliphumuzayo le-Wellness Lounge. Noma kunjalo, akudingeki ukuba umuntu akhumbule izinkumbulo. Ngoba akunzima kakhulu ukuthola lo mkhathi ekhaya. Ngezixazululo ezimbalwa kanye namaqhinga ungakha isikhungo esihle sokuzilibazisa esimangalisayo ezindongeni zakho ezine. Yebo, akunakwenzeka njalo ukufaka i-sauna endlini yokugezela. Noma kunjalo, kunamathuba amaningi okufaka ubunjiniyela.
Okokuqala, kufanele ukhethe indawo efanelekayo. Kuye ngezidingo zakho, ikona lekamelo lanele. Lapho ungenza khona ukhululekile. Uma ungenza ukhululekile ngencwadi enhle, ungathenga isihlalo sokulenga. Yengeza imithwalo ekhanda futhi ubuhle obuhle futhi udale i-oasis yokufunda ethule. Okukhangayo nakakhulu kungaba yisihlalo sokusikhipha. Ezikhathini zanamuhla zokuthenga, lezi zitholakale zitholakale nabathengisi abacindezelekile. Uma umuntu ebeka isithandwa sokusikhipha umzimba kufanele athathe into ejulile esikhwameni. Uma ungayinaki ikhwalithi yezihlalo zokubhunga, izihlalo zamakhanda noma amakhishi, ngeke uthole ukuphumula. I-ambience ejabulisayo inikezwa izesekeli ezizenzekelayo, ezingatholakala ngezishibhile kakhulu, isibonelo kusuka enkampanini entsha yeKARE. Abantu abajabule abangakhethi izindawo ze-08 / 15 bazojabula lapho.
Yiqiniso, phakathi nobusuku be-spa ekhaya lakho, akukho ukuzwa okufudumele okugeza okungafinyeleleka. Kodwa ngosawoti omncane wokugeza, lokho kungenziwa kahle. Amanzi acebile amaminerali akhipha ikakhulukazi izifo ezingapheli futhi asize nge-allergies kanye ne-rheumatism. Okuhlangenwe nakho okuphelele kwekhaya lakho, Yebo, kuhlanganisa nokuphulukiswa okungasetshenziswa ngaphakathi nangaphandle. Noma ubani ofuna ukulungela ihlobo elizayo kumele asebenzise ukuphilisa okubandayo okufudumele. Ngisho noma bengeke bajabule, baphumelela kakhulu.
Uma lokhu kuyinkimbinkimbi kakhulu kuwe, ngakho-ke ungaphinde ululame ngokwenza lutho. Ukushiya yonke into yedwa akulula kakhulu kubantu abaningi. Kodwa yilokho okufanele uqeqeshe. Ukwengeza omunye uziveza ngokucacile ukuthi namuhla kukhona usuku lokungabi nalutho. Lapho wenza khona izinto ozithandayo kuphela. Wonke umsebenzi ongajabulisayo uhlala nje ngakwesobunxele. Ubani ongakwazi ukubona lokhu ngenxa yezizathu zesikhathi, okuyinto indlela yokuphila kahle eyeluleka ngokuphelele. Kuthiwani ngobuhle emotweni, isibonelo?
Massagesessel - Izinzuzo
Ukushisa izihlalo kanye nokuhlalisa umzimba kunomthelela omuhle empilweni yabo ngenxa yomsebenzi wabo wokuphunga umzimba. Ukusikhipha kuvuselela ukuphumula. Emuva, imisipha yezintamo kanye nehlombe ikhululiwe futhi ikhanda elihlobene nokucindezeleka kanye nobuhlungu be-back lunganciphisa. Izimpawu zokucindezeleka ezifana nomfutho wegazi ophezulu ungathuthukiswa yisihlalo sokusikhipha. Ngokuzilibazisa ngamabomu esihlalweni se-massage, ikhono lokuyeka likwazi ukuqeqeshwa futhi izinkinga zokuphefumula noma ukuthunga zingathuthuka. Imilenze emilenze, izimpawu zokukhathala kanye nezifo ezibangelwa ukujikeleza zingahle zilungiswe ukusikhipha umzimba njalo esihlalweni noma esihlalweni. Ngaphezu kwalokho, ukuphumula ngokuzithandela kunomphumela omuhle ohlelweni lwezinzwa ze-vegetative kanye ne-psyche. Izihlalo zokugaya izimonyo zanamuhla zibuye zikuhlinzekwe ngendlela ekhangayo futhi ehambelane kahle egumbini lakho lokuphumula.
Uma ufuna ukuphumula hhayi ekhaya kuphela, kodwa futhi ehhovisi ngokumelene nokucindezeleka nokuphila okuphazamisayo kwansuku zonke, khona-ke isihlalo sehhovisi esinomsebenzi wokusikhipha isisindo esifanele. Ziphathe ngokwakho noma izikhathi eziningana ngosuku imizuzu embalwa yokuphumula nokuphumula, khona-ke ungabhekana nezinkinga zansuku zonke ezisanda kuqiniswa.
Isihloko sangaphambiliniUkuqina kwesisu sesisu somzimba
Isihloko esilandelayoinja Crate